Nnwom 42 NA-TWI - NKYƐM A ƐTO SO ABIEN NNWOM 42-72 - Bible Gateway
Nnwom 41Nnwom 43
Nnwom 42 Nkwa Asem (NA-TWI)
42 Sɛnea ɔforote pere hwehwɛ nsu no, saa ara na mepere hwehwɛ wo, O Onyankopɔn. 2 Wo ho sukɔm de me. Onyankopɔn teasefo, bere bɛn na metumi akɔ akɔsom wo wɔ w’anim? 3 Misu awia ne anadwo na nusu nko ne m’aduan. Bere nyinaa m’atamfo bisa me se, “Wo Nyankopɔn wɔ he?”